Matte Black Ikhishi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu nge Donsa Down Sprayer Matte Black Engagqwali
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / WOWOW Ikhishi ompompi abane-Pull Down Sprayer Matte Black Stainless Steel
WOWOW Ikhishi ompompi abane-Pull Down Sprayer Matte Black Stainless Steel
Thuthukisa impilo yakho yasekhishini - I-high-arc Kitchen sink faucet swivels 360 ° futhi ifaka i-1.5 m PX yokukhipha ipayipi, enweba indawo yokuwasha nokwenza ukupheka kusebenze kahle. Umpompi ompompi wekhishi owodwa ohlanganisiwe kulula ukulungisa ukugeleza kwamanzi nezinga lokushisa.
NAKEKELA IMPILO YAKHO - Ukuziqhayisa ngomzimba onensimbi engagqwali engu-304 nomgogodla oqinile wethusi, le eco-friendly ikhipha umpompi wasekhishini udlula isitifiketi se-CEC futhi iqinisekisa ukuphepha kwamanzi. Indawo emnyama emnyama imelana nokugqwala, izigxivizo zeminwe, ukugqwala, futhi kulula ukuyihlanza ngendwangu ukuze ubukeke buhlanzekile, buhle.
3 IZIMODI FUTHA INHLOKO - Misa kancane / Stream / Futha. Imodi yokusakaza engaguquki yokugcwalisa amanzi (isilinganiso sokugeleza: 1.5 GPM), isifutho esinamandla sokuhlanza okuqinile nokuhlanza (isilinganiso sokugeleza: 1.7 GPM), futhi ume isikhashana ukuze ugweme ukusaphazeka ekusebenzeni okuningi. I-aerator eyakhelwe ngaphakathi ye-ABS inikeza ukugeleza kwamanzi okushelelayo ngenkathi yonga amanzi kuze kufike ku-50%.
KULULA ukungena - Amapayipi wamanzi afakwe ngaphambili akusiza ukuthi uzifakele wedwa kungakapheli imizuzu engama-20 ngaphandle kweplamba. Siphinde sinikeze i-8-inch Deck Plate (ilingana nosinki womgodi ongu-1 noma 3).
ISIQINISEKISO SEMINYAKA EMI-5 - Iphakheji Kahle ngeBhokisi nesipanji esijiyile. Lapha kwa-WOWOW, siyaziqhenya ngekhwalithi yompompi bethu basekhishini yingakho ukufakwa kulula, izingxenye zenziwe ngezinto zekhwalithi, futhi wonke ama-oda eza nenqubomgomo yokubuyisa yezinsuku ezingama-90.
I-SKU: 2312701B Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: Isikhiphi sekhishi, Umpompi wasekhishini one-spray down, Ikhishi Sink Faucet, insimbi engagqwali ekhishini ompompi
Amasentimitha angu-21.34 * 11.1 * 2.83